Ndeipi mitemo iri nyore kutevedzera kuvandudza charisma yako - AFRIKHEPRI
Charisma ndechimwe chezvinyorwa izvi kuti zvakaoma kurondedzera nemashoko, asi kuti isu tinoziva patinozviona. Heanoi iyo definition of charisma by the wikipedia :
Ichava nera isinganzwisisiki ine mumwe munhu, kazhinji anowirirana nehupo hwahwo, iyo inokwanisa kukwezva kubatana, kufadza kwevanhu vakawanda.
Kubva pane tsanangudzo iyi, tichakurukura zvikuru zvinhu zvitatu:
The Aura : ichinyorwa ichi chiduku, kusanganiswa kusinganzwisisiki asi kunzwisisika kunoita kuti munhu achinetseke.
Inokwanisa kuvaka sangano : Vanhu vane shungu ndevaya vane kambani yatinotsvaka, uye kuti tinoda kutevera.
Kubva kuvanhu : Charisma unyanzvi hwemagariro nemagariro. Iwe haugone kuva chekusimudzira kana uchigara pachiwi cherenje.
Vakawanda vedu tinoziva vanhu vane chengetani vakakomberedza. Vanhu ava vari kufadza, asi kunakidzwa kwavo kunobva kupi?
Charisma inongedzo yeunhu hunofanirwa nemunhu hunomurega kuti afungidziwe nevanokurudzirwa sechinhu chinoshamisa uye chinonakidza. Uyu munhu ane simba rekutungamira uye kubudirira mukurumbidzwa paanenge achibata manzwiro evanhu vaanosangana navo pasina kupiwa zvachose kunaka kana hupfumi hwakawanda.
Asi charisma haisi kutonga nokuti inotsigira pamusoro pezvose pamusoro pechokwadi uye kutendeseka kunotangira kubva mukati.
Vamwe vanhu vane chimiro chechirisma, asi vamwe havaiti. Muzviitiko zvose, charisma inodzidza uye inovandudzwa.
Heano mimwe mitemo isinganzwisisiki yekutevera kuti uwedzere chishuwo chako:
Wedzera kuzvidzora kwako
Kuzvivimba kune imwe yenheyo huru dze charisma. Iwe unofanira kufunga nezvekurikurira iyo zuva nezuva.
Zvakakosha kuti iwe uzive izvi: ichokwadi kuti une zvikanganiso asi chinhu chinokosha ndechokuti iwe uzvizive uye uite zuva rega rega kuti uite kuti uve hune unhu. Usakanganwa kuva zvakare kuziva nezvehuhu hwako uye uhushandise mumabasa ako.
Zvivimba iwe zvakakwana. Usapa zvikwereti zvakawanda kune maonero evamwe pamusoro pako. Asi tenda mukati mako, mumano ako, mukutonga kwako.
Sangana nekutya kwako. Iwe uchazoziva kuti ivo vari pamwe vasina chikonzero.
Iva nemafungiro akasimba uye uite zvose nekutenda uye kuvimbiswa.
Muchidimbu, zvifungidzire iwe pachako.
Asi chenjerera: kuzvidzora hakune chokuita nekuzvikudza. Usazviona uri mukuru kune vamwe, asi kupa munhu mumwe nomumwe ruremekedzo rwaunoda kupiwa kubva kwavari.
Chiitiko chinoratidza kuti nzira yakanakisisa yekunzwisiswa nevamwe ndeyokutanga nekuvateerera.
Ratidza vanhu waunosangana navo kuti une chido kwavari. Inzwa wakasununguka muhupo hwavo uye uvatarise muziso pavanotaura newe vachimwemwe nguva nenguva. Bvunza mibvunzo pamusoro pezvavanoda uye varatidze kuti munofarira mhinduro dzavo. Teerera kwavari zvakanaka pavanotaura newe. Vadana navo nemazita avo okutanga maverengi panguva yekukurukurirana. Izvi zvichakubatsira kuti uzviyeuke zvakanyanya.
Kurumbidza vanhu nomwoyo wose uye pakarepo (nguvo yakanaka, bvudzi idzva, maitiro aunofarira, nezvimwewo). Taura zvakanaka pamusoro pevamwe kunyanya kusipo kwavo.
Ita izvi uye iwe uchapa vanhu zvikonzero zvakakwana zvekuyeuka iwe.
Iva akasununguka munguva dzako hurukuro
Pakukurukurirana kwako, taura nevatongi vako maererano nezvinodiwa nevatauriri vako. Taura pamusoro pezvinovada chaizvo. Iwe uchaona kushingaira kwavanozosunungura nekuzviratidza ivo pachavo.
Iva neruzivo rwepamusoro pamisoro dzakasiyana-siyana kuti uite uchinzwa wakasununguka mukukurukurirana kwako. Kana iwe usingazivi nyaya, bvuma iwe unongoda kudzidza.
Shandisa mutauro wemuviri panguva yekutaura kwako nekuunza nenguva nenguva zviduku zvoushamwari (pamapfudzi muenzaniso) wekutaurirana kwako.
Iva netsika yakanaka; Mira zvakananga, zorora, tarisa mberi, uye famba nesimba zvikuru nechivimbo. Tora chimiro chekushongedza chinoratidza unhu hwako. Usatya kutarisa vanhu muziso. Gara, ive yakasikwa uye ureruke.
Iva nezwi rakanyarara uye rakavimbika paunotaura uye kazhinji uise kuseka mumashoko ako. Izvi zvinokubvumira iwe uye wako interlocutor kuti uve wakasununguka uye uzarurire.